ကျနော်တို့ Recoverit, ဒေတာပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆော့ဖ်ဝဲကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ | Gadget သတင်း
ကျနော်တို့ Recoverit, ဒေတာပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆော့ဖ်ဝဲကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
အကယ်စင်စစ်သင့်အနေဖြင့်အမှု၌အပ်ပေးပြီ, သင့်ကွန်ပျူတာ၏အူသိမ်တွင်ရှာဖွေ, သင်တစ် ဦး သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖိုင်ရှာမတွေ့ပါ။ ဒါမှမဟုတ်အမှားအယွင်းအားဖြင့်သင်ဟာစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုပြန်လည်အသုံးပြုသည့်အမှိုက်ပုံးထဲသို့ပို့လိုက်ပြီး၎င်းကိုသင်ပြန်လည်ထုတ်ယူချင်တဲ့အားထုတ်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်နာရီပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့သောအရေးကြီးသည့်အလုပ်ကိုမဆုံးရှုံးရန်အချိန်ပြန်သွားလိုသောကြောင့်၎င်းသည်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောအခြေအနေဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ Wondershare Recoverit။ ၎င်း၏အမည်ကဖော်ပြသည့်အတိုင်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုမည့် software ဖြစ်သည် အချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ hard drive များသို့မဟုတ်ပြင်ပသိုလှောင်မှုများ ပျောက်ဆုံးသွားသော၊။ ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးရှိသောဒေတာများဆုံးရှုံးသွားပါက၎င်းတို့ကိုပြန်လည်ရယူရန်နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ယနေ့ Actualidad Gadget မှာ, ငါတို့သည်သင်တို့ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်တစ် ဦး ချင်းစီအဆင့်ဆင့်ပြသပါ။ ငါတို့နှင့်အတူလိုက်နိုင်မလား?
ပထမဆုံးသိရတာက Wondershare Recoverit ဟာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ် Windows နှင့် Mac နှစ်ခုလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်ဖိုင်များပြန်လည်ဆယ်တင်ရာတွင်ဖြစ်နိုင်သည့်ကျယ်ပြန့်သောဖြစ်နိုင်ချေများကိုပေးထားသည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်ကဲ့သို့သော extensions များနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် DOC, XLS နှင့် PPT အဖြစ်ဝေးစာရွက်စာတမ်းများသက်ဆိုင်ရာအဖြစ်; AVI၊ MOV၊ JPG သို့မဟုတ် GIF ရုပ်ပုံတွေ၊ ဗွီဒီယိုတွေအတွက်၊ သို့ compressed မော်ကွန်းတိုက် RAR သို့မဟုတ် ZIPပင်စာရွက်စာတမ်းများအတွက် PDF ဖိုင်ရယူရန်။ ဤဖိုင်များကိုမည်သည့်နေရာမှပြန်လည်ရယူလိုသည်ကိုအရေးမကြီးပါ internal hard drives နှင့် external storage drives နှစ်ခုလုံးတွင်အလုပ်လုပ်မယ်SD ကဒ်၊ USB ချောင်းများသို့မဟုတ်ပြင်ပ hard drive များစသည်တို့ဖြစ်သည်။
Wondershare Recoverit ကကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးသည် လိုင်စင်အမျိုးအစားနှစ်မျိုး။ တဖကျတှငျ, ဗားရှင်း Recoverit Pro ကိုWindows အတွက်ဒေါ်လာ ၄၀၊ Mac အတွက်ဒေါ်လာ ၈၀၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူဗားရှင်းဖြစ်သည် Recoverit UltimateWindows အတွက်ဒေါ်လာ ၆၀ နှင့် Mac အတွက် ၁၀၀ ကျသင့်ပြီး၊ စက်တစ်လုံးအတွက်လိုင်စင်ချပေးသည်။ နှစ်ခုအကြားအဓိကခြားနားချက်ဖြစ်ပါတယ် Ultimate version ကကျွန်တော်တို့ကို boot drive တစ်ခုဖန်တီးဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မယ် ကွန်ပျူတာသည် boot မတက်လျှင်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ operating system ပျက်စီးသွားလျှင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏ hard drive မှအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူရန်။ သင်စမ်းချင်လျှင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုစစ်ဆေးပြီးမည်သည့်ပုံစံကိုနောက်ပိုင်းတွင် ၀ ယ်ယူရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ သူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာရရှိနိုင်မယ့်စမ်းသပ်ဗားရှင်းရှိပါတယ်။
ကတင်ပြတစ်ခုတည်းသောန့်အသတ် အခမဲ့ဗားရှင်း အဆိုပါ Pro ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌တစ် ဦး ထက်ပို။ အဘယ်သူမျှမဖြစ်ပါတယ် 100Mb န့်သတ်ချက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်ဖိုင်တွေ၏။ Wondershare Recoverit ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ PC သို့မဟုတ် Mac တွင်တပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည် ၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ကျွန်တော်တို့ကိုညွှန်ကြားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ operating system နှင့်ကိုက်ညီသော "free trial" ဟုအမည်တပ်ထားသောခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့နှိပ်ပြီးသည်နှင့် download ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်စတင်ပါလိမ့်မည်၊ စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းသည် run ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ Installer ကို run ပြီးသောအခါ၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်အတွက်အဆင့်များကိုသာကျွန်ုပ်တို့လိုက်ရပါမည်။ ၎င်းပြီးဆုံးချိန်တွင်ပရိုဂရမ်သည်အလိုအလျောက်ပွင့်လာပြီးမူလမြင်ကွင်းကိုရှာလိမ့်မည်။
ဤအချက်မှာ အဓိကပရိုဂရမ်မျက်နှာပြင်ငါတို့ရှေ့မှာရှိလိမ့်မည် ရရှိနိုင်သောရွေးချယ်စရာများ Wondershare ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအပေါ်။ mouse ၏ cursor တစ်ခုစီအပေါ်တွင်နေရာချမည် အနည်းငယ်သာအကျဉ်းချုပ် တစ်ခုချင်းစီကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ် option ကိုအဘို့ဖြစ်၏။ ကျနော်တို့ကနေရှိသည် ပယ်ဖျက်ဖိုင်တွေ၏ပြန်လည်နာလန်ထူ ထ အပြည့်အဝဒေတာပြန်လည်နာလန်ထူ မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုပြင်ပကိရိယာများပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ formatted disk တွေဒါကြောင့်အပေါ်, partitions ကိုဆုံးရှုံးနှင့်။
၏အမှု၌ မည်သည့်ရွေးစရာကိုရွေးချယ်ရမည်ကိုမသိပါအမြဲတမ်းလုပ်နိုင်တယ် အပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူလုပ်ဆောင်ရန်ရွေးချယ်ပါ။ ဒါဟာဖြစ်လိမ့်မည် ကြာကြာနှင့်ပိုပြီးအကြမ်းခံဖြစ်စဉ်ကို၊ စနစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာရှိသိုလှောင်ရေးယူနစ်အားလုံးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့ကိုပြန်လည်ရယူရန်ဖျက်ပစ်ထားသောအချက်အလက်များကိုရှာဖွေသည်။ Hard Drive သိုမဟုတ်သိုလှောင်နိုင်သည့်မီဒီယာများ၏စွမ်းရည်ပေါ် မူတည်၍၊ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာနာရီအနည်းငယ်အထိကြာနိုင်ပါတယ်.
လယ်ပြင်ထဲ ၀ င်ပြီး၊ အားလုံးရွေးချယ်မှုများလက်တွေ့ကျကျအတူတူပင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အထက်ပါပုံတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းအမှုတစ်ခုစီတိုင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အသင့်တော်ဆုံးကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားမေးမြန်းမည့်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည် မည်သည့်အထောက်အပံ့မှပြန်လည်ရယူလိုသည်ကိုရွေးချယ်ပါ ဒေတာ။ အလုပ်လုပ်ရန်ယူနစ်ကိုရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့် Recoverit အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဖော်ပြထားသည့်ယူနစ်၏ဖိုလ်ဒါပုံအပြင်တိုးတက်မှုဘားကိုပြသခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယူနစ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမပြီးဆုံးမီကြာမည့်အချိန်ကာလကိုဖော်ပြသည်။
ငါတို့ရပါလိမ့်မယ် ဖိုင်များကိုကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခု အကြောင်းပြ သစ်ပင်, အရာပြသပါလိမ့်မယ် folder ကို directory ကို ဟုယူနစ်၏, ဒါမှမဟုတ်၏အမြင်၌တည်၏ မှတ်တမ်းများ, ဘာ ဖိုင်တွဲများကိုခွဲခြားပြီးစုစည်းလိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ရွေးချယ်စေကာမူ၊ ကွင်းခတ်၌တည်၏ ဖိုင်တွဲတစ်ခုစီ၏နောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည် ဆယ်တင်လို့ရတဲ့ဖိုင်အရေအတွက်အောက်ပါပုံတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း။
အချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူလိုသည့်ကြားခံကိုရွေးချယ်သောအခါ၊ ဖြစ်နိုင်သည်။ သငျသညျစတင်မှီတိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်းအချိန် မည်သည့်ဒေတာကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ရယူလိုသည်ကိုရွေးချယ်ရန် ရှည်လျားသောအရာတစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Recoverit မီဒီယာအညွှန်းကိန်းရှိပါတယ် ဖိုင်များမေ့သွားခြင်းမရှိစေရန်၎င်း၏အချက်အလက်အားလုံး၊ ဖိုင်များသို့မဟုတ်ဖိုလ်ဒါအားလုံးနှင့်အတူသိုလှောင်ခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ဆယ်တင်နိုင်သည့်ဖိုင်များအားလုံးပေါ်လာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးအစားအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သိမ်းလိုသောစာရွက်စာတမ်းကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးဖြစ်သည်။ သေးငယ်တဲ့ရွေးချယ်ရေးစတုရန်းပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ အဲဒါကိုရွေးရန်ဖိုင်တစ်ခုစီ၏ဘေးတွင်တွေ့လိမ့်မည်။ တစ်ချိန်ကအားလုံးရွေးကောက်တော်မူပြီ, pulsar ညာဘက်အောက်ခြေ « Recover »ခလုတ်ကို.
သငျသညျမြင်နေကြသကဲ့သို့, သူ့ စစ်ဆင်ရေးအလွန်ရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိသည်၊ ၎င်းသည်မှားယွင်းစွာဖျက်မိခြင်းသို့မဟုတ်မြေပုံပေါ်မှပျောက်ကွယ်သွားခြင်းများရှိသည့်စာရွက်စာတမ်းများကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်သင့်အားကြီးမားသောကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ်အလွန်ရှုပ်ထွေးသောပရိုဂရမ်များမလိုအပ်ပါ။ « recover »ခလုတ်ပြီးတာနဲ့ပရိုဂရမ်ကိုနှိပ်ပါ ဖိုင်ကိုသိမ်းချင်တဲ့နေရာကိုမေးလိမ့်မယ်, နှင့်ဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ် စက္ကန့်အနည်းငယ်မှမိနစ်အနည်းငယ်အထိကြာနိုင်ပါသည်သိမ်းဆည်းရန်ဖိုင်အရွယ်အစားပေါ်မူတည်သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းကိုသင်ယခင်အဆင့်၌သင်တည်ထောင်ခဲ့သောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။ အမျိုးမျိုးသောဖိုင်များ (သို့) ဖိုလ်ဒါများမှဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါက၊ folder ကိုဖွဲ့စည်းပုံရှိနေဆဲပါလိမ့်မယ်အရပျ၌အသီးအသီးကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း။ သင်မြင်သည့်အတိုင်း၎င်းသည်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည် လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေး ၎င်းသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတများစွာမလိုအပ်ပါ။ သံသယမရှိဘဲ, ထို program ကို ရိုးရိုး PDF ကိုပြန်လည်ဆယ်တင်ခြင်းမှ bootable recovery disc ကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီနိုင်သည်ကွန်ပျူတာ၏အဓိကလည်ပတ်မှုစနစ်၌အမှားအယွင်းရှိလျှင်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့သတိရပါ ဒီရွေးချယ်မှုကို Ultimat ဗားရှင်းမှာသာရနိုင်သည်အစီအစဉ်၏အီး။
အကယ်၍ သင်အလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သံသယရှိနေသေးရင်၊ ငါတို့သည်သင်တို့ဝင်ရန်အကြံပြုပါသည် Wondershare Recoverit က်ဘ်ဆိုက်နှင့်စမ်းသပ်မှုဗားရှင်းကို download လုပ်ပါ။ ဒီတော့ 100Mb အထိသာပြန်လည်ရယူနိုင်လိမ့်မယ် ဖိုင်တွေထဲမှာပေမယ့်ခြော သင်၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ် နှင့်၎င်း၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ သင်အနည်းဆုံးစမ်းကြည့်ပြီးတာနဲ့ သင့်မှာ Wondershare Recoverit ၏ Pro version ရှိဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်၊ ပြန်လည်ဆယ်တင်တဲ့ disc ကိုဖန်တီးဖို့ခွင့်မပြုပေမဲ့၊ ကျန်ရွေးစရာများ သူတို့သည်သင်၏တစ်နေ့တာအတွက်အလွန်အသုံးဝင်လိမ့်မည်နှင့်၊ hard drive၊ သိုလှောင်ရေးစက် (သို့) သင့်ကွန်ပျူတာနှင့်ပြproblemနာရှိပါကမပြောပါနှင့်။ ထိုကဲ့သို့သောပြproblemsနာများကိုသတိမပြုမိသော်လည်း Recoverit သည်၎င်းတို့ကိုအံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လဲ tutorial » ကျနော်တို့ Recoverit, ဒေတာပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆော့ဖ်ဝဲကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ